Diinka dhulka Soomaalida muxuu qiimo u yeeshay? - BBC News Somali
Diinka dhulka Soomaalida muxuu qiimo u yeeshay?
Haddii aad dhowaanahan maqli jirtay Boqollaal diin oo loo dhoofin rabay Shiinah iyo bariga Aasiyaa oo lagu qabtay dalalka qaar ee Afrika ama Hindiya, Hadda waxaa la sheegayaa in midka dhulka Soomaaliya ay halis soo wajahday.
Wararka ka imaanaya qeybo ka mid ah jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa sheegaya in noolaha diidiinka uu halis ugu jiro in la ugaarsado oo la dabar gooyo, balse lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa.
Baraha bulshada ee Soomaaliya waxaa dhowaanahan ku soo badanayay warar sheegaya in ay jiraan dad ugaarsanaya diinka.
Urur u dooda ilaalinta deegaanka oo lagu magacaabo Barwaaqo ayaa sheegay in diinka loo iibgeeyo gobollada qaar ama loo dhoofiyo dibadda.
Khadra Cumar Xasan oo ah guddoomiyaha ururkaasi waxay sheegtay in guud ahaan duur joogta lagu hayo faro ba'an oo ay kala kulmayaan dad ugaarato sharci darro ah.
"Diinka wuxuu ka mid yahay khayraadka dalka, arrinkanna waa mid soo cusboonaaday oo beryahan dambe la hadal hayay, ugaartii kale ee la qaadan jiray buu ku soo biiray", ayey tiri Khadro oo BBC Somali la hadashay.
Halista soo food saartay diidiinka Somaliland
Warar horay loo soo saaray waxaa lagu sheegay in ay jiraan dalal loo dhoofiyo diinka oo dawo ahaan looga isticmaalo. Saameynta ugu wayn ee arrintaas waxay ku yeelatay Hindiya.
Wasaaradda Deegaanka iyo Horumarinta reer miyiga ee Somaliland ayaa soo saartay qaraar lagu mamnuucayo in diinka la ugaarsado.
Maxaa laga faa'idaa diinka?
Khadra ayaa sheegay: "Waxaa la igu yiri wuu hilib badanyahay oo waxaa u maleynayaa in ay qashaan. Aniga ma garanayo si kale oo ay u isticmaalaan."
Lama oga in Somaliland ay dad u qabatay arrintan, balse hadda waxaa jiro akhbaard sheegaysa in kooxo loo qabtay, sida ay sheegtay guddoomiyaha ururka ilaaliya deegaanka, Khadra Cumar Xasan.
Dalalka ka hortaga dhoofinta diidiinka waxaa ka mid ah Hindiya, horraantii sannadkii tagay waxay qabatay kumannaan xabo oo la sheegay in lagu sii waday Shiinaha.
Didiinka intabadan waxaa la geeyaa Koofur-Bari Aasiya, halkaas oo hilibka iyo qoloftiisa ay qaali ka yihiin. Meelaha qaar ayaa la sheegay in looga arko in "hilibkiisa uu xoojiyo raganimada".
Sidoo kale qalfoofta ayaa laga sameeyaa budo loo isticmaalo dawo dhaqameed.